Umpheme kungenziwa ngokuthi ubuso indlu ngayinye. I kuyokwenziwa kangcono, the umbukwane mnandi futhi uyobheka izindlu. Omunye izigaba ukwakhiwa yompheme kuyinto izinyathelo indalo. Kulokhu, kukhona ezinye umehluko wemisindo nemiqondo yamagama ukuzicabangela. Ngaphambi ukudala izinyathelo zompheme, uzodinga akhethe indawo ethize lapho bayobizwa elise. Kukholakala ukuthi ukulinganiselwa esiqinile kulokhu akuyona, wonke umuntu ekhululekile ukuba ukhethe indawo akuthandayo. Kodwa kuwukuqonda kuwufanele ukuthi izinyathelo zompheme kufanele zitholakale indlela elula ngabantu. Kungcono ukwakha nabo isiqondiso lapho esangweni noma ithrekhi lapho ungakwazi ukuhamba ekhaya lakho.
Uma unombuzo mayelana izinto, kulesi simo endaweni yokuqala kufanele acabangele izinga yabo. Professionals ngokuvamile ukweluleka ukusebenzisa Ceramic ukuthi ilungele njengendlela material ebheke. Phakathi izinzuzo emimoya Tile Ceramic, ebaluleke kakhulu - ukuqina kanye ukumelana ukucindezeleka mechanical. Izinyathelo zompheme, ehlotshiswe zobumba, ingahlala isikhathi ngokwanele eside futhi buqinile. Kushintsha izinga lokushisa, nokuchayeka kumakhemikhali, uthuthumele mechanical nokunensa - konke lokhu akunamthelela okokusebenza uqobo. Ngakho-ke, uma ungazange wenza isiqunto esivuna a izinto ezithile ambozwe, ungathenga tile Ceramic.
Kubalulekile ucabangela ukuthi, ngenkathi kokuqeda izinyathelo kompheme ne tile Ceramic, kubalulekile ukuba unakekele frost. Cishe, abanikazi izindlu ungathandi uma kompheme njalo iqhwa. On kuzoba esabekayo ukuya. Ukuze bazivikele ezihlukahlukene ukulimala, kubalulekile ukuba enze ukukhetha esivuna frost ukumelana tile Ceramic. Mayelana izinga material futhi Okungamelwe futhi sikukhohlwe. Uma ukhetha ukuthi yinhle kakhulu, ungayembethe ukumelana efanele, ungaqiniseka ukuthi ngeke eside ukukhonza. Kunalokho, wamane ngeke ukusekela umswakama futhi ngokushesha liphuke.
Uma ungafuni ukuthenga zobumba, ungakwazi makudle izinkuni. Libuye impela impahla ethandwa. izitebhisi Ngokhuni zompheme okwamanje kungabonwa emikhayeni eminingi yokutholwa. Kodwa lokhu kuyaqondakala, ngoba izinkuni has zonke izimfanelo ezidingekayo: ukuqina, ukumelana ukucindezeleka mechanical, ukuqina, njll Uma ukhetha izinkuni material for izinyathelo okudingeka uyiphatha necebo ekhethekile ngaphambi kokufakwa ...
Kungakhathaliseki impahla ukhetha, kubalulekile ukuqonda ukuthi inqubo yokudala izinyathelo okumelwe wasondela umthwalo omkhulu wemfanelo. Ngisho AMANGA kancane kungonakalisa ngokuphelele wonke look izinyathelo esikhathini esizayo. Njengoba ngishilo ngenhla, kompheme - umuntu ekhaya.
Ngakho ukwenza konke ngokuphelele. Futhi uma ungakwazi ukunquma ku umklamo kuyoba isinyathelo zompheme, izithombe imikhiqizo siphelile kuzokusiza ukuba wenze isinqumo esifanele. Inhlanhla ku isakhiwo!
Lokho ephatha angina? Ubovu namathansela kunokwelapha?